Bvunza Semalt Expert How To Remove Google Analytics Spam
Zvaisazova zvisina kunaka kutaura kuti kuudza ndeimwe yezvinhu zvakakosha zvekutengeserana, uye data yakavimbika ndiyo inokosha yekubudirira mukubika. Dzimwe nguva muGoogle Analytics 'dashiboard, tinocherechedza kuti nhamba yakawanda yehits iri kuuya. Iro chaizvoizvo magetsi emotokari uye inofanirwa kubviswa kare nekukwanisa. Tinofanira kugara tichiongorora chekuona kwedu kuti tiongorore uye tigadzirise dambudziko tisati tanyanyisa uye tinorasikirwa newebsite yedu kune vanosekwa.
Unonzi Abgarian, Mutungamiri Mukuru Wekutsvaga Kwemutengi we Semalt , anotsanangura pano pamatanho ekubvisa spam inoshungurudza nokukurumidza - umzugsservice telekom email.
Usati wagadzirisa zvirongwa zvako muGoogle Analytics, unofanidza kuongorora zvose zvinoshandiswa uye unogadzirisa zvakakodzera. Izvi zvichakubatsira kuti uite zvakanakisisa nzira. Iwe unogona kutanga nzira kuburikidza kuedza nhamba yemafungiro ari kugamuchira. Kana uchinge waedza, danho rinotevera nderekuvhara marwagwa e spam uye zvinyorwa zvavo. Ichokwadi kuti pane nzira dzakawanda dzekudzivirira kuparadzirwa kwepamu uye mabhota, asi nzira iri nyore ndeyekuti Google iite basa rako. Enda kuChikamu chechikamu uye gadzirisa maitiro ako Bot Filter. Nenzira iyo unogona kudzivirira kuuya kwevanhu vasiri vechokwadi uye yezvokutengesa kwepamusoro. Google inogara ichishandura mabhodhi ayo ekutsvaga uye mazano ekubatsira vabatsiri webmasters kuwana huwandu huripo kubva kune zvavanowana.
Chii chinonzi spam traffic uye kuti ungaiziva sei?
Spam migwagwa inokwanisa kukanganisa nemafaira ako..Inotanga nheyo yayo nokutumira nzira isina maturo uye maonero asina kunaka. Kana iwe ukaona vazhinji vevashanyi uye iwe usingazivi zvavanotora, kune mikana yokuti spam yakakunda nzvimbo yako. Iyo spam yemotokari inotumirwa nemhando dzakasiyana-siyana dzemabhodet uye mabheji ezvepamberi zvakagadzirwa nepamusoro-chekucheka vanocheka kuti vape mashoko ako ega.
Kune nzira dzakasiyana dzekuongorora, kuziva uye kubvisa spam. Chokutanga pane zvose, unofanira kugadzirisa zvirongwa muDashboard yako yeGoogle Analytics. Iwe unofanirwawo kuumba mafaira ekuchengetedza kuitira kuti data yako isati yakarasika. Kunyanya, zvakakosha kutarisisa kana bounce yako yehuwandu uye mawebhukiti epa websaiti yakasvika kune chiratidzo kana kwete.
Kwete izvi chete asiwo unofanira kutarisa uye kugadzirisa Google yako yakabatana Hostnames. Kana iwe ukaona kuti Googleweblight ndiyo zita rako remusangano, ipapo icho chinhu chakanaka kuenda nacho. Kana zvisina kudaro, iwe unofanira kuchichinja sezvaunogona.
Nzira yekudzivirira sei spam migwagwa
Imwe yenzira dzakanyanyisa uye dzakanakisisa dzekuvhara marwadzo emitambo ndeyokusika mafungiro emagetsi nguva dzose. Izvo zvinofanira kunge zvine zita rako rezita, zita refaira, uye zita remubati. Iva nechokwadi kuti wakapa mazita akasiyana kune mamwe mawebhusayithi kana madzinza kuti urege kudzivisa. Iwe unofanirwa kuisa iyo firiji yemafuta kuti ive yakagadzirwa uye inosanganisira mazita emajeri pano. Nhanho inotevera ndeyekuti uone imwe neimwe firiji usati wairidzira iyo nzvimbo yako.
Ichokwadi kuti kune nhamba yakakura yezvinyorwa zve spam. Izvo zvaunoda kuita ndezvokuvhara zvose zvemashoko acho chimwe nechimwe. Sesa dashboard yako yeGoogle Analytics uye nyatsoongorora iwe usati watanga mafaira uye uvhare mitsva ye spam. Kana uchinge watevera matanho aya, zvingava nyore kwauri kuti ubvise marwagwa epa spam. Iva nechokwadi chekuti wakavhara maPs ose ari kushungurudza ekutumira iwe fake fake sezvo inogona kukuvadza nzvimbo yako neAdSense zvakanyanya.